लिओनेल मेस्सीले सर्वाधिक धेरै गोल गरेका यी ५ क्लब ! कुन क्लब कति गोल ? - Experience Best News from Nepal
प्रकाशित मिति : बुध, चैत्र ५, २०७६
विश्व फुटबल जगतमा आफ्नो खेलबाट विश्व मोहित पार्दै विभिन्न रेकर्ड बनाउदै र तोड्दै आफ्नो खेल खेल्दै आएका एक विशिष्ट खेलाडी हुन् बार्सिलोना जायन्ट लिओनेल मेस्सी । आफ्नो खेल जीवनमा लिओनेल मेस्सीले ७०० औ गोलको आकडा समेत पार गरिसकेका छन् । उनले हालसम्म ७०३ गोल लक्ष्य पुरा गरेका छन् ।
तर लिओनेल मेस्सीले आफ्नो फुटबल जीवनमा सर्वाधिक धेरै कुन र कति क्लबलाई गोल गरे त्, हेरौ तथ्यांकमा :
५) एस्पैनोल : ला लिगा खेल र ला लिगा क्लब अन्तर्गत लिओनेल मेस्सीले एस्पैनोललाई २५ गोल गरेका छन्, हालसम्म एस्पैनोलले कहिले बार्सिलोना माथि विजयी पाएको छैन, जसको कारण पनि हुन् सक्छ मेस्सीले उक्त क्लबलाई धेरै गोल गर्न सक्षम रहे । पछिल्लो समय मार्च २०१९मा मेस्सीले एस्पैनोल माथि २ गोल गर्दै टिमलाई जित दिलाएका थिए ।
४) रियल मड्रिड : बार्सिलोना नै सर्वाधिक ठुलो प्रतिद्वन्दी हो रियल मड्रिड तर मेस्सीले नै सर्वाधिक धेरै गोल रियल माद्रिड माथि गरेका छन् । उनले एक्लै ला लिगा ठुलो प्रतिद्वन्दी रियल माथि पूर्ण २७ गोल गरेका छन् । लिओनेल मेस्सीले सर्वाधिक धेरै पटक खेल खेलेका क्लब समेत रियल मड्रिड नै हो ।
३) भ्यालेन्सिया: मे २००८ मा लिओनेल मेस्सीले बार्सिलोनाको ६-० को जितमा पहिलो पटक भ्यालेन्सिया माथि गोल गरेका थिए । मेस्सीले ३ पटक ह्याट्रिक गोल र एक पटक ४ गोल भ्यालेन्सिया माथि गरेका थिए ।
२) एटलेटिको मड्रिड : ला लिगा अर्को ठुलो बार्सिलोना प्रतिद्वन्दी हो एटलेटिको मड्रिड जसलाई मेस्सी एक्लैले ३१ गोल गरेका छन् । मे २००७ मा बार्सिलोनाको ६-० को जितमा मेस्सीले एक्लै २ गोल एटलेटिको माथि गरेका थिए । आफ्नो फुटबल जीवनमा सर्वाधिक दोश्रो धेरै खेल एटलेटिको माथि मेस्सीले खेलेका छन् ।
१) सेभिल्ला : सेभिल्ला माथि मेस्सीले सर्वाधिक धेरै गोल गरेका छन् उनले सेभिल्ला माथि ३० खेलबाट ३७ गोल गर्न सक्षम भएका छन् । उनले पहिलो गोल सेभिल्ला माथि २००६ अक्टोबरना गरेका थिए । उक्त बेला बार्सिलोनाले सेभिल्ला माथि ३-१ को जित निकालेको थियो ।
बार्सिलोना सदाबहार उत्कृष्ट खेलाडीको सुची सर्वाजनिक, मेस्सीको स्थान कहाँ !!
मेस्सी : डेम्बेलेको खेल गति डरलाग्दो, डेम्बेले माथि लिभरपूल र आर्सनलको चासो, ९० मिलियन यूरो
उत्कृष्ट खेल पदर्शन गर्ने खेलाडीको सुचीमा रोनाल्डो २७ औँ र मेस्सी ५२ औँ स्थानमा !!
अन्तत जाभी बार्सिलोना फर्किने पक्का !!
५ पटकको टेस्ट पोजेटिभ देखिएको कनिकाको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ?